Doorashadii Kismaayo oo dib loo dhigey kadib isku dayo ku shubasho ah | Kobciye24.com
Doorashadii Kismaayo oo dib loo dhigey kadib isku dayo ku shubasho ah
Waxaa markale dib loo dhigey doorashadii dhawr kursi oo ka haray kuraastii laga soo dooranayay Dowlad Goboleedka Jubaland, waxaana shalay dhacay in Guddiga Doorashada dadban ee SIET ay ku dhawaaqaan in dib loo dhigey labo kursi oo la dooran.
Arrintani ayaa timid kadib markii ciidamada amniga goobta doorashada ka dhacayso ay is hortaageen isku day Guddoomiyaha Guddiga uu kusoo xareyn lahaa ergo aanan ahayn kuwii uu gudbiyey Nabadoonka Beesha Gaaljecel Imaam Macalin.
Xaalada ayaa cirka isku shareertey markii la gaaray xiligii ergada lasoo xareyn lahaa, waxaana dhacday in xubin ka tirsan guddiga doorashada uu yeeriyey magacyada illaa 8 qof oo aanan ergada ka mid ahayn, taasi oo uu ka horyimid odayga beesha, islamarkaasina ay ciidamada ku raaceen in la raacayo go’aanka odayga.
Xubintii guddiga ayaa dib u laabtay, wuxuuna usoo yeerey Guddoomiyaha Guddiga Cabdi Cali Raage oo isku dayay in uu xoog ku maquuniyo arintaa, balse ergada dhagaha ayay ka fureysteen, waxayna si cad ugu sheegeen in kaliya ay gudaha galayaan ergada saxda ah ee uu ogolyahay odayga beesha Gaaljecel.
Cabdi Cali Raage waxaa la rumeysanyahay in uu garab siinayay mid ka mid ah musharixiinta oo ah Xildhibaan Shaacir, ergada uu meesha ka saarayna waa ergada Wasiirka Batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar.
Inkasta oo ay jireen ficilo badan oo shubasho ah, hadana waxa shalay dhacay waxa ay ahaayeen falkii ugu weynaa ee ku shubasho oo uu isu soo mutaxay guddoomiyaha.